ဗြိတိန်ဆီက ပြန်တောင်းမယ့် မြန်မာပြည်က ပတ္တမြားငမောက်- BBC News မြန်မာ
ဗြိတိန်ဆီက ပြန်တောင်းမယ့် မြန်မာပြည်က ပတ္တမြားငမောက်- BBC News မြန်မာ 5
ပတ္တမြားငမောက်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ မသိတဲ့သူ အတော်ရှားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပတ္တမြားမြေလို့ ခေါ်ကြတဲ့ မိုးကုတ်က ဒေသခံတွေဆိုရင် ငမောက်တဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရာဇဝင်တွေက အများကြီး ကြားဖူးကြပါတယ်။ မြန်မာဘုရင်တွေ အဆက်ဆက် ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ ဒီနန်းစဉ်ရတနာကြီးဟာ သီပေါ်မင်းပါတော်မူချိန်ကစလို့ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီတော်ဝင်ပတ္တမြားကြီးကို ဗြိတိန်ကနေ ပြန်တောင်းဖို့အတွက် သီပေါမင်းအနွယ်တော်တွေက ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ ဘယ်လို ပြန်တောင်းယူနိုင်မလဲ။ ဒီပတ္တမြားကြီးကရော အခု ဘယ်ရောက်နေလဲ။ ဘီဘီစီသတင်းထောက် ကိုဘိုဘိုက ပြောပြမှာပါ။
ရိုက်ကူး - ကျော်ဇေယျ၊ စံကျော်ထွန်း၊ ဖြိုးဟိန်းကျော်
#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #ပတ္တမြားငမောက် #လန်ဒန် #သီပေါမင်း
ကိုယ့္နိင္ငံက အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမဟုတ္ေတာ့ ျပန္ေတာင္းရင္လဲ ငေမာက္ ေတာ့မရဘူး လန္ေက်ာက္ပဲ ရမွာပဲ သတင္းထဲမွာ ပတ္တျမား ႏွစ္ျခမ္း ထဲက တစ္ျခမ္းက တ႐ုတ္ ကုန္သည္ လက္ထဲေရာက္ၿပီး မွ တ႐ုတ္ကုန္သည္က ဗမာ ဘုရင္ ကို လက္ေဆာင္ အျဖစ္ျပန္ၿပီးဆက္သတဲ့အေၾကာင္း ဘာေၾကာင့္ထဲ့မေျပာသလဲမသိ
Author — KungFuDicK
ခင္ဗ်ားတို႔ အင္ဂလန္ ဘုရင္မကို သူခိုးလို႔သတ္မွတ္ရမယ္ က်ဳပ့္ေျပာတယ္
Author — zaw myo
ငေမာက္ က နိုင္ငံျခားဟန္းနီးမြန္း ထြက္လည္ေနတယ္
Author — Ko Min Kyaw
ငါ့တို႔ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္ပဲ ႀကိဳးစားသင့္တယ္ ျပန္ရပို႔
Author — Thar aye
ပြန်မလိုချင်ပါနဲ့ ပြန်မရတာကကောင်းပါတယ် ငမောက်သမိုင်းပါပျောက်မယ် ဆင်းရဲတာကဆင်ရဲနေမှာပဲ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်
Author — Kohtike Myanmar
လိုချင်လို့ ခိုးသွားတာဆိုတော့ ၉၉ ရာခိုင်နှုံ့း မရနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ် နှစ်တွေလည်း ကြာပြီဆိုတော့။
Author — myanmar lay
ဘာလဲမြန်မာပြည် တူးစရာမရှိတော့လို့ ရာဇဝင်ပါပြန်လှန်ရှာတော့မှာလား
Author — ku thant9987
မ​ေအလိုးေတွ ြပန် ေပးရမာ
ေြကာက်လို့ေဝ့လယ် ေြကာင်ပတ် လုပ်​နေတာ​သတင်းတင်
ဆက်သူကိုယ်တိုင်က အဂင်္ လိပ်
ေဖာက်သခိုးဓ ြမထက်ဆိုးသာလည်းမင်းတို့အ ေနာက်နိင်ငံကဘဲ မင်းတို့မတရားသိမ်းယူထားတဲ့ ြမန်မာပိုင် ရတနာ​ေတွက
မင်းတို့ေတွ ခံစားဖို့အချိန် ေရာက်​ေသာမာပါ
Author — Konge Konge
မီဂလာပါ ဘုရ် ရဲ့အနွယ်​တော် ​​မြေး​တော်ကို ​တွေ့ရဒါ ဝမ်းသာပါသည်
Author — Moemoe Moemoe
သတင္းေျပာတဲ့သူ ၾကည့္ပိ အိပ္ ခ်င္လာပိေနာ္ 😴😴😴😴😴
Author — kaungmyat soe
စ ေလဒင္ ယူသြားတယ္ဆိုတာအ ႏုတ္ကထြက္တယ္လာမ ေျပာနဲ႔
Author — Pann Say
တရုပ်တွေကို အကြွေးဆပ်သည့်အနေနဲ့တောင်း ယူခိုင်းလိုက်ရင် ကောင်းမှာပဲ
Author — james gunn
စလေဒင်ရဲ့ မိသားစုမျိုးနွယ်တော်တွေ မိသားစုဝင်တွေဆီကရော အကျိုးအကြောင်း တစ်စုံတရာကြားရတာမျိုး ရှိခဲ့သေးလား သိပါရစေ
Author — MgNamma Thar
သမိုင်းက​တော့ ရှိရမှာ​ပေါ့ ပြန်ယူတာ မယူတာ ​နောက်မှ​ပေါ့
Author — Mya Karen
It could have been recut the ruby to install in the crown
Author — Naing Thar
Author — Thaw Dar Lay
မင္းတို႕လဲ ငေမာက္ကို သတ္ျပီးယူခဲ႔တာပဲေလ
Author — Lin 007
စီ စဥ္ တင္ဆက္ သူက ဘိုုဘိုု ဆိုုေတာ့ လူထုု ေဒါၚအမာ ေျမးလားး ျမစ္လားး ဘဲ
Author — Djent Abagnale Jr.
ပြောလို့မရဘူး မြှုပ်ထားတာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲ လမ်းစက
Author — Chan Pyae
How about the federal rights of the ethnic people. Who stole those rights? Please return first before asking for ruby.
Author — Thiha Wyin
သမၼတထရမ့္ ျပန္ႏွင္လႊတ္လိုက္တဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ - BBC News ျမန္မာ
NLD အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းဦးေတဇ သတင္းေတြဟာ စုပ္စျမဳပ္စ ေပ်ာက္ကြယ္ေနပါတယ္
Myanmar Idol Season4- 2019 | Top 10 | Result Show
ရန္ကုန္က ငါးေလာင္းျပုိင္လူသတ္မူ ျဖစ္ရပ္မွန္
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီနဲ႔ VOA
ရဲတပ်ဖွဲ့တွင်း ရာထူးရဖို့ လိင်ကိစ္စအပေးအယူရှိနေလား စတဲ့ သီတင်းပတ်-BBC News မြန်မာ
သနားစရာ ထိုင်းမိဖုရားဖြစ်ခဲ့သူ ကရင်မလေး နော်မုယယ်ဖဲ
Burma's President U Thein Sein Answers Q & A at VOA Town Hall
လူတွေ သုံးနေတဲ့ အင်တာနက် ကွန်ရက် ဆိုတာ - BBC News မြန်မာ
U Aung Thin ( စာပေဟောပြောပွဲ ဇီးကုန်းမြို့) အပိုင်း ၁ 1-2-2011
သင်မကြားဖူးတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း သင်္ဂြိုလ်နည်းများ